Ma ogtahay, kuwaas oo 10-duubayaasha Spotify?
Helitaanka ugu fiican iyo gobolka Spotify taariikhqorihii tahay waa sida riyo ii rumowday sida ay u hubiso in qofka uu helo ugu fiican iyo kan gobolka ee xarunta duubo tahay oo lacag la'aan ah ama lacag la'aan ah wax badan oo gabayadii Spotify iyo qurbaanno dadka kale ka dhigi doonaa lagu diiwaan geliyay sida uga wanaagsan ee suurto gal ah. Waxaa shaki la'aan waa adeeg dhiman macaamiisha ganacsiga iyo sidoo kale ay u hubiso in premium Spotify waxaa loo isticmaaley si loo hubiyo in ugu fiican ayaa laga duubay mar kasta oo loo baahdo.
Top 10 taariikhqorihii music Spotify
Hoos waxaa ku qoran tobanka rikoorrada Spotify sare in hubaal bedeli lahaa music hab la dhageystay by users ah. Waxay ka tirsan labada Mac iyo daaqadaha:
Qaybta 2. iSkySoft taariikhqorihii
Qaybta 4. afduubato Audio Pro
Qaybta 5. dhiiran
Part6. Celis Music
Qaybta 7. Aimersoft Music taariikhqorihii
Part8. Codeplex taariikhqorihii
Qaybta 9. Dojotech taariikhqorihii Spotify
Qaybta 10. Max taariikhqorihii
Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo qashinqubka ee taariikhqorihii tahay music oo uu soo socod ugu sareysa oo la soo saaro by Wondershare ah. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo duubay lagu sameeyey oo kaliya hal click in wax yaabahan ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira
Qaabka ugu fiican ee
Keydinta file Unlimited
Software ma aha lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan
Isticmaalka mararka qaar waa mid aad u farsamo user a si ay u fahmaan.
2. iSkySoft taariikhqorihii
Shirkadda ayaa sidoo kale waxa ku duuban oo aan lahaa oo kaliya ayaa qaboojin user, laakiin sidoo kale hubin doona in ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka waxaa lagu bixiyaa si user ah in arrintan la xiriira. The horumarinta barnaamijka ayaa sidoo kale xaqiijiyey in ugu fiican oo gobolka ka mid ah goobaha tahay waxaa bixiya la xariirta barnaamij joogto ah oo la sameeyo si loo hubiyo in user waxaa marnaba ka tagay
3. Xun jilicsan
Sidoo kale waa mid ka mid ah barnaamijyada taas oo ka dhigaysa duubo ee Spotify u fududahay iyo wada shaqaynta. Qaab-dhismeedka iyo qaabka guud ee barnaamijka hubaal waa kan ugu fiican ee isticmaala aan isticmaali karin barnaamijyada adag fudayd iyo horumarinta barnaamijka lagu sameeyey hayo waxan ku hay.
4. afduubato Audio Pro
Sida magacaba ka muuqata qalab ayaa la dhisay si ay u hubiyaan in heeso ay ciyaareen Spotify waxaa jabsaday aan arin kasta oo user helo adeegyada jira ee heer xirfadeed. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in marka la barbar dhigo rikoorrada kale ee isticmaala of this mid ka mid yihiin in ka badan ka faa'iideysteen.
Records oo dhan song in la hubiyo in info ee khuseeya tagged
Waxa kale oo ay u qoraan karaan podcasts
Technical in ay isticmaalaan
Interface waa mid aad u adag user ah in la raaco
Sidoo kale waa mid ka mid ah rikoorrada ugu fiican in si gaar ah ayaa loo dhisay si ay u hubiyaan in user helo ugu fiican iyo adeegyada ay Naloo Yaboohay shirkadda iyo sabab la mid ah waxaa mar walba dhawray baahida iyo dalabaadka ka mid ah dadka isticmaala ay si ay u heli karaan adeegyada ay u raadiyaan.
Barnaamijku waa fududahay in la rakibo iyo sida loo isticmaalo
Sidoo kale ka shaqeeyaa sidii editor music inay nabadeeyaan users ah.
Waxaa aad u farsamo ee dabiiciga ah
User ayaa kaarku lumo marka ay timaaddo in la isticmaalo barnaamijka
6. celis Music
Sidoo kale waa barnaamij ballan user in ay heli lahaa cajalado ugu wanaagsan oo ugu dambeyntii waxaa sidoo kale buuxiya yabooha habka ugu fiican. Waa mid ka mid ah barnaamijyada oo la hubiyo in user marna keligiis ayuu hadhay marka ay timaado Spotify duubo online oo sidaas daraaddeed waxa ay sidoo kale hubineysaa in adeegyada ugu wanaagsan waxaa gundhig u ah user iyo waxaa sidoo kale ka dhigay fududahay in si fahmaan oo dhan users isticmaali kartaa barnaamijka fudayd iyo qanacsanaan
Barnaamijku wuxuu u qoraan karaa website kasta
Lagu ogaado iyo tirtirto aamusnaan kuwan raadkaygay gudahood karaa
Interface waa mid aad u halis ah oo aan
Users casriga ah marna ma jeclaan barnaamijkan
7. Aimersoft Music taariikhqorihii
Barnaamijku waxa uu ahaa ciyaaryahanka ugu fiican si loo hubiyo in user helo adeegyada ugu fiican in ay yihiin ma ahan oo keliya sida laga filayo, laakiin natiijada ayaa sidoo kale waa wax la doonayo by user. Horumarinta waxaa si joogto ah u shaqeeya si loo hubiyo in user la cafiyo iyo weli talaabo ka hor dadka kale.
8. Codeplex taariikhqorihii
Sida magaca muujinaysaa taariikhqorihii ahaa inuu xaqiijiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo guud ahaan ayaa la soo saaray hab ugu fiican in ay u oggolaadaan user ay u isticmaalaan oo dhan functionalities ku fudayd iyo sida doonayaan, ama baahida loo qabo. Barnaamijku waxa uu sidoo kale la sameeyey ugu fiican sidii ay cross madal lagu taageeray:
Waxaa si toos ah uga kaarka codka u qoraan karaan
Intaa waxaa dheer ayaa warbixin track sidoo kale waa mid ka mid ah qaababka ugu fiican in la soo gundhig arrintan la xiriira
Waxa aanu tirtirto xayaysiisyada gabayadii lagu duubay gudahood
Waxaa adag in la dhiso on daaqadaha 8.
9. Dojotech taariikhqorihii Spotify
Waa mid ka mid ah barnaamijyada oo la hubiyo in dadka isticmaala ay la siiyaa awood kama dambaysta ah iyo xorriyadda si loo hubiyo in songs waxaa lagu duubay. Aqoonsiga ee Spotify ayaa sidoo kale la sameeyey si toos ah iyo heeso waxaa lagu duubay sida mp3. User ayaa sidoo kale isticmaali kartaa barnaamijka si loo hubiyo in awood waxaa si buuxda loogu riyaaqay,
Editor tag Mp3 ayaa la dhisay
Sidoo kale ka shaqeeyaa sidii regelingen ah in mp3 convertor
Waxa aanu DEAD files leh artist song iyo magaca album
Processing song ayaa sidoo kale u gaabiyaa
Taariikhqorihii 10. Max
> Resource > Spotify > ma u ogtahay Kuwani Top 10 rikoorrada Spotify?